ULwesine, May 6, 2021 ULwesibili, May 11, 2021 ULindsay Tjepkema
Kuthuthukiswe kusuka emcabangweni wokuthi izingxoxo kufanele zibe yi-throughline kukho konke okuqukethwe kokumaketha, i-Casted ukuphela kwesikhulumi sokumaketha okuqukethwe esakhelwe ukunika amandla abathengisi ukufinyelela, ukukhulisa, nokufaka okuqukethwe kwabo komkhiqizo we-podcast ukuphehla isu labo lokukhangisa lokuqukethwe. Ngokungafani nezinye izixazululo zokumaketha okuqukethwe, ezakhelwe ukusiza abathengisi ukukhipha okuqukethwe okubhaliwe nokuningi, iCasted inika amandla abathengisi ukuthi basebenze kahle futhi basebenze kahle ngokuthatha indlela yokuqala yokulalelwayo. Nabasakazi
NgoMsombuluko, Mashi 1, 2021 NgeSonto, ngoMashi 7, 2021 Douglas Karr
Sivame ukuhlanganyela okusebenzayo ngokuthengisa nge-imeyili, kepha kuthiwani ngezinto ezingasebenzi? Yebo, iCitipost Mail ihlanganise i-infographic eqinile, Izinto eziyi-10 Okungafanele Uzifake Emkhankasweni Wakho We-imeyili ohlinzeka ngemininingwane yokuthi yini okufanele uyigweme lapho ubhala noma wenza ama-imeyili akho. Uma ufuna ukuphumelela ngokukhangisa nge-imeyili, nanka amanye ama-faux-pas aphezulu okufanele uqiniseke ukuthi uwagwema uma kukhulunywa ngezinto okungafanele uzifake ku-